Cuba oo bilaabeysa tacsida Castro - BBC Somali
Cuba oo bilaabeysa tacsida Castro
Image caption Cuba oo bilaabeysa tacsida Castro
Waxaa Cuba u bilaabaneysa 9 maalmood oo tacsi qaran kaddib dhimashadii hoggaamihii kacaanka Cuba, Fidel Castro.
Kaddib xaflad gaar ah waxaa xigaya kuwa guud. Way adag tahay in dhabtii laga badbadiyo sida uu Cuba muhiim ugu ahaa Fidel Castro. Hadii uu ahaa geesi isbadal keenay oo la jeclaa oo dalka xoreeyay ama hadii ay u arkaan kaliye taliye wadanka qiyaamay, waxa uu magaca Castro sanado badan ahaa qeyb noloshooda ka mid ah.
Inay la qabsadaan warka sheegaya in 90 jirkii Fidel Castro ee xirnaan jiray dharka iskujoogga ahaa uu ka baxay noloshooda, aad ayey u adkeyd inay ka daadegto.
Koox arday ah ayaa joogtay kulliyadda sharciga ee uu ardayga ka ahaa Fidel Castor 1950-kii, iyagoo sita calanka Cuba, sawiradiisa iyo halkudhegyada kacaanka. In badan ilmo ayaa ka socotay, waxayna aad ugu murugeysnaayeen dhimashada ninkii ay u arkayeen in dalkooda uu ka xoreeyay qabsashada Washington.
Meelaha kale ee Havana, dadka aad ayey u aamusnaayeen. Toddobaadka dambe waxay bilaabayaan socodka tacsida ka hor inta aan loo qaadin Santiago bariga Cuba.
Markii ay maqleen dhimashada Castro ayey habeenkii labaad Miami u aheyd jawi dabaaldeg iyo xaflad. Cubanka Mareykanka ee ka horjeeday Castro waxay doonayeen sanado badan in Fidel uu noloshooda ka baxo. Ma fileynin inay aheyd inay sugaan ilaa uu 90 ka gaaro si ay u helaan rabitaankooda.